Seera - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 11:26 19 Adooleessa 202111:26 19 Adooleessa 2021
Ogeeyyiin miidiyaa mana hidhaa jiran himannaa ''qaama bilisa baasuu'' dhiyeessan
Gaazexeessitoonnii fi hojjattoonni miidiyaa erga to'annoo jala oolfamanii guyyoota 20 lakkoofsisan mana murtii sadarkaa federaalaa Dhaddacha hariiroo hawaasaatti iyyata qaama bilisa baasuu (habeas corpus) dhiyeeffatan.
...tti maxxanfame 10:04 15 Adooleessa 202110:04 15 Adooleessa 2021
Ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa manni murtii kan mirkaneesse Xilaahun Yaamii du'aan akka adabamu Abbaan Alangaa gaafate.
...tti maxxanfame 12:30 12 Adooleessa 202112:30 12 Adooleessa 2021
Manni Murtii dhimma Laamroot Kamaal irratti beellama biraa qabate
Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf beellama biraa qabate.
...tti maxxanfame 13:10 10 Adooleessa 202113:10 10 Adooleessa 2021
Dargaggoo Mohaammad Deeksisoo hidhaarraa gadhiifame
Guraandhala darbe sagantaa eebba barattoota Yunivarsiitii Jimmaarratti kan qabame Dargaggoo Mohaammad Deeksiisoo gadhiifamuu maatiin mirkaneessan.
...tti maxxanfame 5:29 8 Adooleessa 20215:29 8 Adooleessa 2021
Pireezidantiin duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakoob Zuumaa poolisiitti harka kennan
Pireezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa naamuusa dhaddachaa cabsuun hidhaa irratti murtaa’e fudhachuun poolisiitti harka kennaniiru.
...tti maxxanfame 17:14 7 Adooleessa 202117:14 7 Adooleessa 2021
'Jaarmiyaan keenya dhiibbaa mootummaarraa guutummaatti bilisa' - Dr Daani’el Baqqalaa
Video caption: ‘Jaarmiyaan keenya dhiibbaa mootummaarraa guutummaatti bilisadha’ - Dr Daani’el Baqqalaa‘Jaarmiyaan keenya dhiibbaa mootummaarraa guutummaatti bilisadha’ - Dr Daani’el Baqqalaa
...tti maxxanfame 4:48 7 Adooleessa 20214:48 7 Adooleessa 2021
'Rakkoon siyaasaa sarbamni mirga namoomaa akka babal'atu godheera'
Rakkooleen siyaasaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa hammeessaa jiru jechuun Komishinarri Olaanaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr Daani'el Baqqalaa BBC'tti himan. Turtii addaa BBC wajjin taasisan akkanaan qixeessineerra.
...tti maxxanfame 10:30 6 Adooleessa 202110:30 6 Adooleessa 2021
Sababni Obbo Jawaarfaan dhaddacharraa hafuuf dhiyeessan 'quubsaa miti'
Beellama Kibxataa irratti Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Dajaneefi Obbo Amaan Qaallun alatti himatamtootni galmee himataa Obbo Jawaar Mahaammadin waamamu keessatti argaman hundi dhiyaataniiru.
...tti maxxanfame 5:48 3 Adooleessa 20215:48 3 Adooleessa 2021
Shaashamannee, magaalaa gubachuurraa guddachuutti deebi’aa jirtu
Ajjeechaa Wellisaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee mormii fi hokkora Waxabajjii 23, bara 2012 uumameen Oromiyaafi Magaalaa Finfinnee keessatti lubbuu namaa fi mancaatii qabeenyaa hedduu kan hordofsiise ture. Yeroos hookkara kanaan kan hubamte magaalli Shaashamannee haala akkamii keessa argamti?
...tti maxxanfame 11:02 28 Waxabajjii 202111:02 28 Waxabajjii 2021
Obbo Jawaarfaa "murteen mana murtii kabajamaa hin jiru" jechuun dhaddacharraa hafan
Obbo Jawaar dabalatee namoonni afur "murteen manni murtii kennu kabajamaa hin jiru" jechuun dhaddacha har'aa irraa hafan.